စကား စကား စကားထဲက ဇာတိပြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စကား စကား စကားထဲက ဇာတိပြ
Posted by manawphyulay on Jul 20, 2010 in Creative Writing, Poetry |9comments
Creative Writing ဗဟုသုတ
၃။ ရေစီးဖောင်ဆန်ပြောဆိုခြင်း ~ စကားပြောရာ၌ လက်ဝင် ပင်ပန်းသော
၅။ ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့ပြောဆိုခြင်း ~ တဖြည်းဖြည်း ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ဖွဲ့နွဲ့
၆။ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ပြောဆိုခြင်း ~ တာဝန်မဲ့သော၊ ရှောင်လွှဲသောစကားကို
၇။ တောင်သူယာခုတ်ပြောဆိုခြင်း ~ ပြောသင့်သည်ကိုအရင်ပြောပြီး လိုရာကို
၁၁။ ခက်တင်မောင်းနင်းပြောဆိုခြင်း ~ မတင်မကျနှင့် ရှေ့မရောက် နောက်မထိုင်
အရင်ကဒါမျိုးလေးတွေသေချာမသိခဲ့ဘူး ။ thank you ပဲ။
သူ့စကားထဲမှာ သူဟာဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာ သိနိုင်တယ်
ကျေးဇူးပါ ခုလိုတစုတစည်းတည်းဖတ်ရလို့ဗဟုသုတရ ရပါတယ်…..
ပြောပါများ စကားရ ဆိုတာကတစ်ယောက်
စကားစကားပြောပါများ စကားထဲကဇာတိပြဆိုတာက တစ်ယောက်
ဆိတ်ဆိတ်နေ ထောင်တန်ဆိုတာက တစ်ယောက်
ဘူးတလုံးဆောင်အိုတောင်မဆင်းရဲ ဆိုတာက တယောက်..
ငါ့စကားနွားရ ဆိုတာက တယောက်..
မေးပါများ စကားရ ဆိုတာက တယောက်..
ဒီခေတ်ကမ္ဘာမှာ Language quotes တွေအများကြီးပဲ..
စိတ်ရှည်တဲ့တယောက်ယောက် ဘာသာပြန်ရေးနိုင်ရင်.. အင်္ဂလိပ်စာရော..။ မြန်မာစာပါတိုးတက်လာမယ်..။
It’s not what you tell them…it’s what they hear.
When someone does something good, applaud! You’ll make two people happy.
Any language is necessarilyafinite system applied with different degrees of creativity to an infinite variety of situations, and most of the words and phrases we use are “prefabricated” in the sense that we don’t coin new ones every time we speak.
ခုလို တစုတစည်းတည်း ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် ပထမဦးဆုံး ကျေးဇူတင်စကား ပြောပါရစေ။ ဒီလိုမျိုး မြန်မာ စကားပြောနည်းလေးတွေကို ဖတ်ခဲ့ ပေမယ့် မေ့နေပါပြီ။ ခုလို တင်ပေးတဲ့ အတွက် သိမ်းထားလို့ ရတာပေါ့။
မမ မနောဖြူပြောတာကို မောင်လေး
စကား စကား ပြောပါများ စကားထည်းက ဇာတိပြ
အမှန်တကယ်ကြတော့ ဝဇီလို့ ဆိုလို့ ရတဲ့ စကားဆိုတာ
စိတ္တန် ဟူသော စိတ်၏ ဝိတက် ကြံစည်ခြင်းကို ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်ရန် မေ့လျှော့သောအခါ
မမ မနောဖြူပြောတာကို ကျွန်တော်မှတ်သားမိပါတယ်ခင်ဗျ
သူများကို ဆရာသွားလုပ်တာ ကိုယ်ပါမှားပြန်ပြီခင်ဗျ